Ciidanka Nigeria oo la cambaareeyay - BBC News Somali
Ciidanka Nigeria oo la cambaareeyay
25 Nofembar 2014
Image caption Askar ka tirsan ciidanka Nigeria
Ururka ugu weyn ee ay leeyihiin Muslimiinta Nigeria, ayaa si xooggan u cambaareeyay ciidammada dalkaasi, oo u ku eedeeyay in ay ka cararaan weerarrada Boko Xaraam.
Ururka oo lagu magaacabo Jamacatu Nasril Islam, ayaa warqad uu ku matalayo Muslimka Nigeria ku sheegay, in uu si xooggan u dhaleeceynayo falalka xun ee Boko Xaraam, waxaana uu dowladda ugu baaqay in ay difaacdo shacabkeeda.
Ururka ayaa sidoo kale cambaareeyay ciidammada Nigeria, oo la sheego in halkii ay kala dagaallami lahaayeen ay hubka uga cararaan xooggaga Boko Xaraam, kaddibna ay dhibaateeyaan dadka rayidka ah iyaga oo jidgooyooyin u dhigta, baaritaanna ku sameeya guryaha.
Jamacatu Nasril Islam oo uu hoggaamiyo Sultanka Sokoto, ayaa sheegtay in madax bannaanida Nigeria ay khatar ku sugan tahay, maadaama Boko Xaraam ay qabsatay deeganno badan.
Dowladda Nigeria ayaa sheegtay in intee karaankeeda ah ay ku dadaaleyso jabinta Boko Xaraam. Balse weerarrada ururkaasi ayaa sii kordhaya, waxaana kii ugu dambeeyay ay Boko Xaraam har cad ku qaaday suuq ku yaalla gobolka Borno.
Dagaalyahannada Boko Xaraam ayaa isu soo ekeeyay dad ganacsato ah oo alaabo ku sita kartoono, waxaana ay galeen suuqa oo lagu magacaabo Damasak, kaddibna waxa ay kartoomada kala soo baxeen hubkooda.
Ilaa iyo hadda lama oga tirada dadka ku dhimatay weerarkaasi, waxaana dadka deegaankaasi ay intooda badan u qaxeen dalka deriska la ah ee Niger.
Sunta dadka ka ilmeeysiisa oo lagu riday baarlamaanka Nigeria
20 Nofembar 2014
Milatariga Nigeria oo la wareegay Chibok
16 Nofembar 2014
Maxaabiis "lagu laayay" dalka Nigeria